राज्यभित्र विकास हुन्छ, विकासभित्र हुँदैन राज्यः जअकसं – खबरम्यागजिन
Homeखबरदार्जीलिङराज्यभित्र विकास हुन्छ, विकासभित्र हुँदैन राज्यः जअकसं
दार्जीलिङ खबरदाता, 10 मई।
राज्यका मन्त्रीहरु दार्जीलिङमा आएर हामीलाई यहाँबाट डाँड़ा कटाउने धम्की दिंदैछन्। यसैले गोर्खा जातिको सुरक्षाको लागि पनि हामीलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ। यसैकारणनै गोजमुमोले यस चुनाउलाई बंगाल बनाम गोर्खाल्यान्डको संज्ञा दिएको हो
राज्यभित्र विकास हुन्छ, विकासभित्र राज्य हुँदैन। यसैले विकास होइन, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डकै लागि जनाधार देखाउन यसपालीको नगरपालिका चुनाउमा सम्पूर्ण नगरवासी जनताले गोर्खाल्यान्डको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ।
आज गोजमुमोको एक भ्रातृ संगठन जनमुक्ति अस्थायी कर्मचारी संगठन (जअकसं)-ले दार्जीलिङ पहाड़का नगरवासी जनताप्रति यस्तो आह्वान गरेको छ। आज नगरपालिका चुनाउ विषय लिएरनै जअकसंले यहाँ एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो, जसमा संगठनका अध्यक्ष मचिन्द्र सुब्बाले भने-विकास पुल निर्माण गर्नु, सड़क बनाउनु मात्रै होइन, विकास सर्वांगीण हुनपर्छ अनि गोर्खा जातिको आफ्नै अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड भए विकास स्वतः भएर जानेछ।
तर अहिले नगरपालिका चुनाउको समय राज्यको सत्तारूढ़ दल तृणमूल कंग्रेसले विकास भन्दै पहाड़का नगरवासी जनताअघि भोट मागिरहेको छ। तर यसै राज्यको अधीनमा रहेको जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन)-का अस्थायी कर्मचारीहरुको विकास भएको खोई? यी कर्मचारीहरुलाई स्थायी बनाउने पहलमा बाधा किन? के राज्य सरकारले पहाड़मा यस्तै विकास चाहेको हो? भारत स्वतन्त्र नहुँदा पनि दार्जीलिङ पहाड़मा विकासका कार्यहरु भएकै हो।
के दार्जीलिङ पहाड़को नगरपालिका चुनाउमा तृणमूल कंग्रेस हारे, राज्य सरकारले पहाड़का नगरपालिका क्षेत्रमा विकासको कार्य गर्नेछैन? के दार्जीलिङ पहाड़मा विकास गर्ने दायित्व राज्य सरकारको होइन? उनले यस्ता कैयौं प्रश्‍नहरु खड़ा गर्दै भने-राज्यभित्र विकास हुन्छ, तर विकासभित्र राज्य हुँदैन। यसैले अलग राज्य गठनकै लागि जनाधार देखाउन यस चुनाउमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई जीत हासिल गराउनुपर्छ। हाम्रो आफ्नै राज्य भए हामीले चाहे जस्तो विकास गर्न सकिनेछ। तर अहिले पश्‍चिम बंगाल राज्यमा दार्जीलिङ पहाड़बाट विजय भएर विधायकहरुलाई मन्त्री पद नदिइएको कारण पहाड़मा ठीकसित विकास पनि हुनसकेको छैन। न यहाँ जनताको इच्छाअनुसारनै कुनै विकासको कार्य हुन सकिरहेको छ।
यसैले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि जनसमर्थन प्रदर्शन गर्न गोजमुमोले नगरपालिका चुनाउ मात्रै होइन, प्रत्येक चुनाउनै जित्न आवश्यक छ। यसरीनै संगठनका प्रवक्ता दीपक शर्माले तृणमूल कंग्रेस नेता एवं राज्यका मन्त्री इन्द्रनील सेनको वक्तव्यको कठोर शब्दमा आलोचना गर्दै पहाड़का जनताले उनको चेताउनीको जवाब व्यालेटमार्फत दिनुपर्छ भन्ने आह्वान गरे। उनले भने-राज्यका मन्त्रीहरु दार्जीलिङमा आएर हामीलाई यहाँबाट डाँड़ा कटाउने धम्की दिंदैछन्। यसैले गोर्खा जातिको सुरक्षाको लागि पनि हामीलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ। यसैकारणनै गोजमुमोले यस चुनाउलाई बंगाल बनाम गोर्खाल्यान्डको संज्ञा दिएको हो।
बंगालका मन्त्रीहरुले चुनाउको समय दार्जीलिङ पहाड़मा आएर विकासको कुरा गरिरहेका छन्, तर भारतकै एक सबैभन्दा पुरानो, ऐतिहासिक अनि गौरवशाली दार्जीलिङ नगरपालिकालाई राज्य सरकारले अहिलेसम्म विकासको किरण देखाएको खोई? जीटीएका विभिन्न रिक्त पदहरुमा स्थायीकरण गर भनेर सूची पठाउँदा पनि यसमाथि ध्यान दिएको खोई? सरकार भएपछि राज्यभरिनै समानरूपले विकास गर्न आवश्यक थियो, तर पश्‍चिम बंगाल सरकारले विकासमा पनि दार्जीलिङ पहाड़प्रति सानीआमाको व्यवहार देखाइरहेको छ।
राज्य सरकारको यस्तो नीतिबाट राज्यले दार्जीलिङ पहाड़लाई अलगै हो भन्ने स्वीकार गरिसकेको स्पष्ट भएको पनि उनले बताए। यसैबीच, संगठनका सचिव किशन गुरूङले संगठनका सदस्यहरुलाई भूलभ्रान्तिमा नपर्ने आह्वान गर्दै अस्थायी कर्मचारीहरुलाई हक र अधिकार दिलाउन संगठन संघर्षरत रहेको बताए।